केन्ट काउन्टर टप भेजिटेबल कीटाणुनाशक उपकरणमा २० प्रतिशत छुट | Ratopati
काठमाडौं । ई.ओ.एल. प्रा.लि. नेपालमा केन्ट उत्पादनहरूका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक सि.जी. इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गतको संस्थाले केन्ट काउन्टर टप भेजिटेबल कीटाणुनाशक उपकरणमा २० प्रतिशत छुटको साथ आएको छ ।
यस उपकरणले साग–सब्जी, फलफूल र मासुबाट कीटनाशक, ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू हटाउँदछ । केन्ट टेबल भेजिटेबल कीटाणुनाशक उपकरणलबाट तरकारी र फलफूलहरू उपभोगका लागि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । यसमा रासायनिक रहित ओजोन टेक्नोलोजी छ जसले हानिकारक कीटनाशक, रसायनहरू आदि हटाएर तरकारी र फलफूलहरू कीटाणु रहित गर्दछ ।
तरकारी र फल कीटाणुनाशकले ओजोन कीटाणुशोधन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ जसले ब्याक्टेरियाहरू, भाइरस, ढुसी र अन्य रोगजनकहरूलाई मार्दछ जुन खानाले खानाबाट रोगहरू निम्त्याउन सक्छ ।
मासु र समुद्री खाना सफा सुरक्षित बनाउदछ
यो प्रभावकारी अवशिष्ट रसायनहरूको प्रभावकारी ढंगले अक्सिडाइज गर्दछ र मासु र समुद्री खानाको सतहबाट एन्टिबायोटिकहरू हटाइ खान योग्य बनाउदछ ।
यसको मज्जाको र कम्प्याक्ट डिजाइन छ जसले ठाउँको बचत गर्दछ र टेबल टप प्लेसमेन्टको लागि सहज छ ।
यो उपकरणले ओजोन उत्पादन गर्न कुनै उपभोग्य वस्तुहरू प्रयोग गर्दैन । यो वातावरणमा भएको अक्सिजन प्रयोग गरी उत्पादन गरिन्छ । तसर्थ, यो कुनै पनि सेवा वा कुनै पनि अंश को प्रतिस्थापन को आवश्यकता छैन । यो उत्पादन एक वर्षे वारेन्टीको साथ आउँछ र सम्पूर्ण नेपालमा उपलब्ध छ ।
नेपालमा यस ब्राण्डअन्तर्गत वाटर प्युरिफर, एयर प्युरीफायर, स्मार्ट घरेलु उपकरण, भ्याकुम क्लिनरहरू जस्ता अन्य उत्पादनहरू पनि उपलब्ध छन् ।